Fiangaviana ireo fikambanan'ny dia amin'ny italiana: vaksinin'ny mpiasa fizahan-tany rehetra
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Italia » Fiangaviana ireo fikambanan'ny dia amin'ny italiana: vaksinin'ny mpiasa fizahan-tany rehetra
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao farany Italia • Vaovao • fanorenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Databank COVID-19 misokatra fidirana WHO
Ny fikambanan'ny mpivarotra fizahan-tany sy ny fizahan-tany ary ny sendika any Italia dia nanangana hetsika hiarovana ny mpiasan'ny fizahantany amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny vaksinin'ny COVID-19.
Ny fifanarahana nasionaly iraisan'ny mpiasa dia mangataka amin'ny manampahefana amin'ny fampiharana ara-potoana ny vaksinin'ny COVID-19.
Mba hiantohana ny ahiahy momba ny fiarovana dia, tsy ny mpandeha ihany fa ny mpiasa no tokony hatao lohalaharana amin'ny ady amin'ny virus coronavirus.
Ny famoahana ny dia indray dia tsy maintsy hialohan'ny fiarovana ny mpiasan'ny fizahantany.
Vaksinin'ny COVID-19 ho an'ny mpiasan'ny fizahantany rehetra: io no antso avo natolotry ny fikambanam-barotra lehibe ary nozarain'ny sendikan'ny mpiasa any Italia. Hetsika iray kendrena amin'ny famolavolana ny famoahana indray ireo hetsika fizahantany ao anatin'ny fepetra fiarovana ara-pahasalamana tanteraka.
Ny mpampiasa sy ny fikambanan'ny sendika dia mamaritra ny fifanarahana nasionaly momba ny asa iraisana izay mihatra amin'ireo orinasa eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany dia nanao sonia fifanarahana mangataka amin'ny tompon'andraikitra amin'ity sehatra ity mba hahazoany miditra ara-potoana ny Fandaharana vaksinin'ny COVID-19 ho an'ny mpiasa eo amin'ny sehatry ny fizahantany.
Ny fifanarahana dia mamaritra ny fanaovana vaksiny fanoherana Sars-CoV-2 / COVID-19 ho fitaovana ilaina hiantohana ny fandriam-pahalemana amin'ny fizahan-tany, miaraka amin'ny mpiasa sy momba ny besinimaro.
Ho fiheverana ny filàna manokana hijerena manokana ireo mpiasa eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany amin'ny fampiharana ny drafi-vaksiny, ny antoko dia mangataka amin'ny tompon'andraikitra foibe sy eo an-toerana mba hampiditra azy ireo ao anatin'ny sokajy laharam-pahamehana amin'ny fanaovana vaksiny indrindra manoloana ny filàna fiarovana ireo hetsika izay manohy miantoka ny serivisy na eo aza ny risika.
Mba hiantohana ny fahombiazan'ny fampielezana vaksinina, nifanaraka ireo antoko tamin'ny farany mba handray andraikitra hampiroborobo, eo amin'ireo mpiasa miasa, ny hetsika fampahafantarana sy fampahafantarana mikendry ny hanaovana vaksinina hiadiana amin'ny viriosy mandeha.
Ny fikambanan'ny mpampiasa dia mamaritra ny fifanarahana nasionaly momba ny asa iraisana izay mahita fampiharana ao amin'ny sehatry ny fizahantany dia: Federalberghi, Fipe, Faita & Fiavet (mpikambana ao amin'ny Confcommercio); Assocamping, Assohotel, Assoviaggi, ary Fiba & Fiepet (mpikambana ao amin'ny Confesercenti).
Ny fikambanan'ny sendika dia manondro ny Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), fifanarahana asa iraisan'ny fanjakana izay mahita fampiharana amin'ny sehatry ny fizahantany dia: Filcams Cgil, Fisascat Cisl, ary Uiltucs.